Military Myanmar Government had virtually reached the arrogant level of telling its people to eat cake if there isn’t any bread to consume | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ပန်းတောင်းအနောက်ဗလီကို ခဲဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုများ ညစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေ – မင်းမဲ့စရိုက် မကြီးထွားရန်အာဏာပိုင်တို့၏အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါ
Masjids in Myanmar »
In Chinese culture, there is (attributed to Emperor Hui of Jin by the book Zizhi Tongjian)asimilar story that involves rice and meat, instead of bread and cake: “an ancient Chinese emperor who, being told that his subjects didn’t have enough rice to eat, replied, ‘Why don’t they eat meat?'”.(Wikipedia)
Tags: Burma, Cake, Emperor of China, France, History, Let them eat cake, Marie Antoinette, Myanmar, Nargis, Queen consort, Rice, Shwedagon Pagoda
This entry was posted on May 27, 2012 at 4:41 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Military Myanmar Government had virtually reached the arrogant level of telling its people to eat cake if there isn’t any bread to consume”
May 28, 2012 at 9:19 am | Reply
အစိုးရ အကြံပေးဦးကိုကိုလှိုင်ရဲ့ မီးမလာရင် ဖယောင်တိုင်ထွန်းဆိုတဲ့စကား နဲ့ ဘုရင်မတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်
မုန့်မရှိရင် ကိတ်မုန့်စားဆိုတဲ့ စကားက အတူတူပဲ ။
တကယ်မဆင်းရဲ မကျပ်တည်း ဒုက္ခမကြုံဖူးတဲ့လူက အဲ့ ဒီဒုက္ခကို တွေးကြည့်လို့ပဲ ရတာ ၊ တကယ်လက်တွေ့အရသာကိုမသိဘူး ။
ဒီနေ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ ဆောင်းပါးတိုလေး တပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကျနော်တော်တော်
အတွေးပွားသွားတယ် ။ အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကလည်း ကျနော်နဲ့ တော်တော်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေ ၊ ပြောရရင် သောက်
ဖော်သောက်ဖက် ၊ ကဗျာ ရွတ်ဖော် ရွတ်ဖက်ပေါ့ ။ ထားတော့ ။
သူ့ဆောင်းပါးမှာ ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ . . . ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါတဲ့ ၊ မလိုအပ်သေးပါဘူးတဲ့ ။
ကျနော်တို့မှာ လျှပ်စစ်မီးသုံးစရာလည်း သိပ်မရှိပါဘူးတဲ့ ၊ ထမင်းချက်တာ တီဗွီကြည့်တာလောက်ပဲ လုပ်
တဲ့လူတွေက ဆန္ဒပြတယ်ပေါ့လေ ။ တကယ့် လျှပ်စစ်ကိုသုံးနေတဲ့ စက်ရုံပိုင်ရှင်တွေ က ဆန္ဒထွက်ပြရ
မှာတဲ့ ၊ ကျနော်တို့က အပ်နဲ့ထွင်းရမဲ့နေရာကို ပုဆိန်နဲ့ပေါက်နေတာတဲ့ ၊။ အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်တော့
ဒီ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ရေးထားတယ် ။
ကျနော် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ် ။ ကျနော်တို့များမလိုအပ်ပဲ နဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးအချိန်ကုန်ခံ ၊ အဖမ်းခံရမှာ
မကြောက် ဘာမကြောက် နဲ့ ဟေးလားဟားလား လုပ်နေကြသလား ? ။
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘ၀က အစိုးရတရပ်ရဲ့ ( ဘယ်အစိုးရ တက်လာတက်လာ ) ထားရာနေ စေရာသွား ၊ သူတို့လုပ်သမျှ ငြိမ်ခံ ၊ သူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ပြီး ဒီအတိုင်းဆက်နေသွားရတော့မှာလား မဟုတ်သေးဘူးနော် ၊ အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူး ။
လူတစ်ယောက်မှာ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ရှိရတယ် ၊ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာ
ဒီမြေ ဒီရေ ဒီနိုင်ငံဟာ အဲ့ဒီအစိုးရတရပ်ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်အမွေ မဟုတ်ဘူး ။ အဲ့ဒီပါတီရဲ့ အပိုင်ပစ္စည်း
လည်းမဟုတ်ဘူး ။ နိုင်ငံသားတိုင်းပိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရပ်တည်မူ့ကွဲပြားသွားလို့သာ နိုင်ငံဖြစ်ရပ်
တွေ နဲ့ မနီးစပ်တာပဲ ရှိမယ် ၊ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ နိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေမှာ လိုအပ်လာရင် ပါဝင်ရမယ် ။ ကျနော် အဲ့ဒါကို နိုင်ငံရေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တယ် ။
ဟေးလား ဟားလား ၊ အီးယောင်ဝါးလုပ်ချင်မှတော့ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ပြီး ဘယ်အချိန်ရဲလာဖမ်းမှာကိုကြောက်
ရွံ့နေတာမလုပ်တော့ဘူး ။ ဘီယာသောက်ပြီး ကေတီဗွီပဲ သွားလိုက်တော့မယ် ။ ပိုက်ဆံမရှိရင် လဖက်ရေ
သောက်ပြီး မိတ်ဆွေတွေနဲ့ လေဖေါနေလိုက်မယ် ။
ဒီ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတယ်ဆိုတာ ရင်ဘတ်ထဲကလာတဲ့
စိတ်တစ်ခုနဲ့ထွန်းနေတာ ။ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့် ၊ ကိုယ့်မိသားစုရဲ့ ရပိုင်ခွင့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုနေတာ ။
ကျနော်တို့အိမ်မှာ ရေစက်မရှိဘူး ၊ ရေ၀ယ်ရတယ် ၊ ကိုယ့်လိုရေ၀ယ်တဲ့အိမ်တွေများတော့ စောင့်ယူရတယ် ။
မီးပျက်သွားရင် ဘယ်လောက်စောင့်စောင့်မရတော့ဘူး ။ မီးလာတဲ့အချိန်က ည၁၂ နာရီ ၊ ၁ နာရီဆို ရင်လည်း
ရေစက်ပိုင်ရှင်တွေက ရေထမပေးဘူး ။ အဲ့လို နှစ်ရက်လောက် ကြုံသွားရင် ဒုက္ခကို လှလှရောက်ရောပဲ ။ မျက်
နှာသစ်စရာရေတောင် ဘေးအိမ်က ရေဗုံးလေးနဲ့ သွားတောင်းရတယ် ။
သူတို့ကလည်း ကိုယ်လိုဒုက္ခသည်ဆိုတော့ ယူရတာ အားနာစရာကောင်းတယ် ။ ဒီတော့ ရှင်းရှင်းပဲ
ပြောမယ် ။ ပိုက်ဆံရှိပြီးရေ၀ယ်မရလို့ ၊ အ်ိမ်သာတက်စရာရေမရှိအောင် ဒုက္ခများလွန်းလို့ ၊ ကျနော် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းရပါတယ် ။
အရင် က စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တုန်း က လူတွေဆန္ဒမပြရဲကြဘူး ၊ ရိုက်နှက်ခံရမှာကြောက်ကြတယ် ၊ အဖမ်းခံရမှာ
ကြောက်ကြတယ် ။ အခုတော့ အရင်ကထက် နည်းနည်းလေး တိုးတက်လာတယ် ။
ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီး ဆန္ဒပဲ စွတ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး ။ အခု အစိုးရက ဒီမိုကရေစီအစိုးရ နာမည်ခံထားတယ် .နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဒီမိုအစိုးရဆန်ရမယ်ဒီတော့ ပြည်သူကလည်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတယ် ။
တောင်းဆိုတာက ပြည်သူ့ကိစ္စ ။
နောက်ဆုံး ၀န်ကြီးကို နုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုရင်တောင် တောင်းဆိုတာက ပြည်သူ့ကိစ္စ ၊ နုတ်ထွက်ပေး တာမပေးတာက ၀န်ကြီးနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ ကိစ္စ ။
အရင်တုန်းက စစ်အစိုးရဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုလို့မရဘူး ၊ အခုဒီမိုအစိုး
ရ လို့ အစိုးရ အဖွဲ့ ကိုယ်နိုက် က ၀န်ခံထားတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကလည်း ဒီမိုနည်းလမ်းနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ် ။
ဒါတောင် ပြည်နဲ့ စစ်ကိုင်းမှာ အဖမ်းခံရတယ် ။ ရန်ကုန် နဲ့ မန်းလေးမှာတော့ ရုပ်ပျက်မှာစိုးလို့မ
ကေအိုင်အေ က တာဝါကို မိုင်းခွဲလို့ မီးပျက်ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးမှန်တယ်မထင်ဘူး ၊ ကေအိုင်အေ မိုင်းမခွဲ
ခင်ကတည်းက မီးက မမှန်တာ ။
အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ ရေအားလျှပ်စစ်နည်းတယ် ၊ ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မြင့်မယ် ဆိုတာ ကြိုတွေးထားသင့်တယ် ။
ဒီလိုမှ မလုပ်ပေးနိုင်ရင် ၊ ဒီလို အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုတောင် မလုပ်ပေးနိုင်ရင် ဘာကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေသေးလဲ ၊ ခရိုနီတွေကိုပဲ မကြည့်ပါနဲ့
သာမန် ပြည်သူတွေကိုလည်း တခါတလေ ငဲ့သင့်တယ် ။
အခု အစိုးရက နှစ်ပါတ်အတွင်း မီး၂၄ နာရီရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးထားတယ် ။ ပြောတာပဲ ၊ တကယ်လာမှ ကျနော်တို့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတာကို ရပ်နိုင်မယ် ၊ လုပ်ပေးမယ် လုပ်ပေးမယ်နဲ့ ခံရပေါင်းလည်းများလှပြီ ။
၈၈ ကတည်းက ပေးလိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ၊ အခုတောင့်ရတာမသေချာသေးဘူး ။ တကယ် ၂၄ နာရီမီးပေးရင် ဘယ်သူမှ အပင်ပန်းခံ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဖယောင်းတိုင်ထွန်းမနေဘူး ။ အခုမီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိတောင် လမ်းပေါ်ထွက် ဖယောင်တိုင်ထွန်းလို့ရတာ ။
အရင်လို ငြိမ်နေရင် ဘာမှ မရပဲ အမှောင်ထဲမှာ ငုတ်တုတ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ။ ဒီတော့ နောက်
နှစ်ပါတ်ကြာလို့ မီး ၂၄ နာရီပေးရင် ကျနော့်မိတ်ဆွေ . . . တနိုင်ငံလုံးက အားအားယားယား ဖယောင်းတိုင်
ထွန်းသူတွေကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ . . . ။